यसलाई सफा राख्नुहोस्: स्वयंसेवक र फुटबल प्रशंसक सँगै ल्याउँदै • DutchtownSTL.org • Dutchtown, सेन्ट लुइस, MO
यसलाई सफा राख्नुहोस्: स्वयंसेवकहरु र फुटबल प्रशंसकहरु सँगै ल्याउँदै
प्रकाशित अक्टोबर 14th, 2021
बिहानको शनिबार, अक्टोबर 23rd, छरछिमेकका स्वयंसेवकहरु र सबै क्षेत्र बाट फुटबल प्रशंसकहरु डचटाउन मा रद्दीटोकरी सामना गरीनेछ। पछि, प्रशंसकहरु मा फुटबल मैदान र फुटसल कोर्ट मा मैत्रीपूर्ण पिक-अप खेल को लागी व्यवहार गरिनेछ मार्क्वेट पार्क.
स्वयंसेवकहरु9बजे गैसकोनेड र भर्जिनियाको फुटसल अदालत नजिक भेला हुनेछन्। पानी, नाश्ता, र उपकरणहरु प्रदान गरिनेछ। टोली पार्क, साथै नजिकै ब्लक र गल्लीहरु लिटर को शिकार गर्न को लागी लिनेछ। दुई ट्रक र शहर बाट एक ठूलो डम्प्स्टर संग, हामी बाटो मा पाउन सकिन्छ कि कुनै पनि भारी वस्तुहरु टाढा गर्न सक्षम हुनेछौं।
नजिकैका छिमेकीहरुलाई छरछिमेक को आफ्नो टुक्रा सफाई गरेर कार्य मा प्राप्त गर्न को लागी प्रोत्साहित गरिन्छ। बाहिर लिटर बाहिर लिनुहोस्, आफ्नो गल्ली बाहिर बाहिर सफा गर्नुहोस्, वा केहि यार्ड काम गर्न को लागी तपाइँको ब्लक चम्काउन मद्दत गर्नुहोस्।
सहभागी युवाहरुको लागी सशुल्क अवसर
१ to देखि २४ बर्ष उमेरका छिमेकीहरु बाहिर आएर र सफाई प्रयासहरुमा सहयोग गरेर आठ घण्टा सम्म १० डलर प्रति घण्टा कमाउन सक्छन्। इमेल kicstlouis@gmail.com वा कल गर्नुहोस् (314) 265-6186 दर्ता गर्नु। पूर्व दर्ता भुक्तानी प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
सफाई पछि, खेलाडीहरु दिउँसो मैदानहरु लिनेछन्। त्यहाँ पिक अप खेल को लागी अवसरहरु हुनेछ, त्यसैले तपाइँको कूदने मौका को लागी आएर स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। एथलेटिक प्रोग्रामिंग को नेतृत्व गरिनेछ। Umoja सेन्ट लुइस फुटबल र सेन्ट Louligans.
Umoja Soccer वयस्क टोलीहरु संग संगै युवाहरु संग काम गर्दछ, मुख्य रूप बाट अफ्रिका बाट आप्रवासीहरु। सेन्ट Louligans फुटबल प्रशंसक र समर्थक र क्षेत्र भर मा खेल को प्रमोटरहरु को एक समूह हो। फुटबल Marquette पार्क मा एक लामो इतिहास छ। संग Marquette पार्क मा नयाँ फुटसल अदालत, संग संयोजन मा निर्मित सेन्ट लुइस सिटी एससी र अन्य साझेदारहरु, हामी अझै फुटबल खेलाडीहरु र प्रशंसकहरु को लागी एक गन्तव्य को रूप मा नक्शा मा डचटाउन स्थापित गर्न को लागी आशा गर्दछौं।
सेन्ट लुइस सिटी एससी युवा फुटबल क्लिनिक
दिउँसोको फुटबल प्रोग्रामिंग को अतिरिक्त, सेन्ट लुइस MLS टीम पनि ५-१२ बर्ष उमेरका युवाहरु को लागी बिहान एक क्लिनिक मा राखीनेछ। क्लिनिक नि: शुल्क छ, तर अग्रिम दर्ता आवश्यक छ। कार्यक्रम बिहान 9:30 बाट 11am सम्म चल्छ।
स्वयंसेवकको नेतृत्वमा सफाई प्रयासको नेतृत्व गरिएको छ डचटाउन मुख्य सडकहरू र स्लाको (सामुदायिक संगठनहरुको सेन्ट लुइस संघ)। Umoja सेन्ट लुइस फुटबल र सेन्ट Louligans दिउँसो को फुटबल उत्सव को नेतृत्व। अतिरिक्त समुदाय साझेदारहरु सामेल छन् उपचार हिंसा डचटाउन, डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, गार्सिया गुण, गुरुung बजार, ला लिगा ल्याटिनो अमेरिका, लु Fusz फोर्ड, लुथरन विकास समूह, सेन्ट जोसेफ हाउसिंग पहल, र Vitendo4अफ्रिका.
तल दायर गरिएको मार्क्वेट पार्क. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. सफाई, डचटाउन मुख्य सडकहरू, र मार्क्वेट पार्क. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
डचटाउन STL.org मार्क्वेट पार्क यसलाई सफा राख्नुहोस्: स्वयंसेवकहरु र फुटबल प्रशंसकहरु सँगै ल्याउँदै